10zọ iri iji nwekwuo nyocha peeji nke iji usoro afọ ojuju | Martech Zone
Fraịde, Jenụwarị 2, 2015 Douglas Karr
Ezi ndụmọdụ abughi oge obula dika ihe omuma a. Diana Adams nke BitRebels depụtara ndepụta Wzọ iri iji bulie ihe ngosi ahụ na ozi gị na Ugbu a mee ka ọ ghọọ ihe ọmụma mara mma.
Ndụmọdụ ahụ kwụ ọtọ:
Denye ọdịnaya dị mma ugboro ugboro (ee, ama m na anyị apụla oge ezumike).
Mee ka ozi gị bụrụ ihe nkesa - anyị hụrụ n'anya Mfe Social Share maka WordPress!
Jiri Ngwaọrụ maka Okike Ọdịnaya - anyị nwere ntọala ntọala maka ọtụtụ isiokwu site na Agbaze mmiri na n'ezie n'anya omimi na oge nke ozi anyị ga-eso.
Nabata Ndị Ọdee Akwụkwọ - mana Lezie anya!
SEO - Nnyocha Nchọgharị Nchọpụta ka dị mkpa mana egbula ya. Ndị a bụ usoro anyị na-eme iji bulite ọkwa anyị.
Dezie & Gụgharịa Okwu niile tupu e bipụta ya - Oops… anyị dara ebe a. Enwere m ụzọ ole na ole ikpeazụ m nyere m nke m doziri. Anyị ejirila echiche nke inwe onye editọ egwuregwu, ikekwe afọ a!
Njikọ Buildinglọ (Ma Ọ bụghị Youzọ I Si Echiche) - Okwu a masịrị m njikọ ịkpata si Atụmatụ saịtị. Ha na-atụle njikọ dị n'ime ya iji chụpụtakwuo nyocha peeji nke - ọ masịrị anyị Jetpack si arụmọrụ metụtara ọrụ maka nke ahụ!
Email Marketing Rightzọ Kwesịrị Ekwesị - ọ bụ ya mere anyị ji wuo ma jiri ya CircuPress!
Agbaji Long Post - Anyị kwesịrị imekwu nke ndị ahụ mana m ga-eme ihe n'eziokwu, akpọrọ m ihe 10+ pịa nke na-akwọ ụgbọala peeji nke iwe na iwe ndị na-agụ gị.
Jiri Social Media kee ihe - Ọ bụrụ na anyị nwekwuru oge, anyị ga - arụrịrị ọrụ na ndị nnọchi anya kachasị mma gosipụtara onyonyo maka post anyị wee jiri usoro ọhaneze ọ bụla rụọ ọrụ nke ọma.
Tags: njikarịcha blogblog postscircupressnchịkọta ọdịnayamfe bọtịnụ mmekọrịta mmadụ na ibe yaemail Marketingndị ọbịa ọbịamụbaa nlele peejinjikọ-ụlọogologo postspost ugboro oleederede metụtaraAnkekọrịtaelekọta mmadụ media
Onyinyechi ugochukwu (@onyinye_jesus)
Dee 1, 2015 na 8: 06 AM
Nke a bụ ezigbo infographic. Daalụ maka ịkekọrịta ya Doug!
Dị ka m na-ahụ na e nwere ụzọ abụọ iji mụbaa nyocha peeji na weebụsaịtị:
Extzọ sara mbara (ịnweta ndị ọbịa ọhụụ).
Ensivezọ siri ike: rata ndị na-agụ akwụkwọ ka gụọ karịa (imeziwanye peeji nke / nnọkọ
Anyị na nso nso bipụtara a post nke na-elekwasị anya na "ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ", nwere ụfọdụ ndụmọdụ dị irè.
Echere m na m kwesịrị ịgbanwe isiokwu a na infographic. 🙂
Dee 1, 2015 na 8: 28 AM
Echere m na nke ahụ bụ ọdịnaya kwesịrị infographic, Tamas!